Saamayn A picture-in-sawir waa saamayn aad loo jecel yahay in in oo noo ogolaadaa in ay arkaan laba images mar. Tutorial waxay kuu muujinaysaa sida in la abuuro this ee FCP X.
Halkan natiijada kama dambaysta ah - kaliya si aad u ogaato meesha aan doonayaa inaan arrintan.
Mar kasta oo aad rabto in aad laba, ama in ka badan, sawirada bandhigay shaashadda waqti isku mid ah, waxaad u baahan tahay inaad vertical iyaga isku xirto. Tusaalahaan, Dr. Cerf madaxa hadal video waa in storyline aasaasiga ah, halka video dhulka fur la kor ku xiran.
FIIRSO: Sargaal si faraq ah. Clips Hoose jira ee asalka ah, halka clips sare waa sawir. Iyo, by default, oo dhan clips waa 100%-shaashad buuxda iyo 100% Doolaal.
Marka laga reebo ... kiiskan, Dr. Cerf ee video waa 4: 3, halka dhulka waa 16: 9. Arag, tani waa waayen tareen.
Dooro clip sare - kiiskan, waa dhulka daadgureyntaasi.
Markaas, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa ka bedelaan gacanta ku in Isbatooraha ah, ama ku-screen gacanta ku in daawadayaasha. Tusaalahaan, waxaan u isticmaali doonaa gacanta ku saabsan-shaashadda.
Iyadoo clip Earth la doortay, guji qaab ka bedelaan button ee geeska hoose ee bidixda ah daawadayaasha. Icon ayaa isla markiiba doorsoomo.
Isla mar ahaantaa, sideed dhibcood buluug muuqan agagaarka cidhifka image la doortay.
Midhadh dhibic oo ay la socdaan laayeen suuradda qaaddo asymmetrically.
Jiid dhibic rukun ah suuradda qaaddo symmetrically xarunta sanamkii. Qabo muftaaxa Xulashada hoos u eega oo ogaada sida tan badala sidii aad u qaaddo image - waa qolfo ka geeska ka soo horjeeda.
Hoos Qabo muftaaxa Shift ah, jiididda, iyo daawan waxa dhaca.
Yaree image ilaa ay muhiimad ahaan waa qiyaas aad rabto.
Guji meel kasta oo gudaha image ka, oo jiidi boos.
Mar kasta oo aad la sawiro in video shaqeeyo, waxaad u baahan tahay in ay sii Action Safe iyo Title Safe labada maanka. Si aad u soo bandhigaan meelahan, guji biiray ee geeska sare ee midigta ah daawadayaasha dooro Show Action / Title Safe Zones.
Wixii warbaahinta, oo dhan qoraal muhiim ah oo logos baahan yahay in la jira gudaha laydi ugu hooseeyey (Title Safe), halka talaabo kasta oo lagama maarmaan u baahan in la jira gudaha laydi dibadda (Action Safe). Tan waxa u sabab dabiiciga ah ee nooc CRT ku salaysan TV - taas ayaa ah inta badan ee sida America ku daawanaya TV.
Si kastaba ha ahaatee, u internetka, ma waxaan u caqabadaha farsamo mid ah, laakiin dhammaanteen waa cimrigeedu ka mid ah daawashada muuqaallo kale video in ay qaataan xuduudaha, kuwaas oo la tixgelinayo. Haddaba sidaas daraaddeed ayaan talo, marka la samaynayo video for internetka, waa in lagu go'doomiyo oo dhan lagama maarmaanka ah qoraalka, naqshadeynta, iyo logos gudaha laydi dibadda (Action Safe). Waxa ay u muuqataa wanaagsan oo uu leeyahay raaxo leh, dareen fiican loo qorsheeyay.
Tusaale ahaan, waxaan doonayaa inaan dhig image ee geeska sare ee midigta ah Action Safe oo guji "sameeyeen." Tani jarto kantaroolida ku-screen iyo sidhab ah image galay meeshii.
Ta-Toure! Our saamayn loo sameeyaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo kala duwan oo hagaajin kale waxaan ka dhigi kara. Halkan waxa ku jira afar ka mid ah:
1. Dooro clip ugu sareeya, Command nooca + 4 in la furo Isbatooraha (haddii u xiran yahay), ka dibna riix badhanka Show buluug ah si ay u muujin qaybta ka bedelaan of dhisay-in saamaynta.
Calan baaxadda image si ay, ku odhan 40%. Isticmaalka Isbatooraha waxay kuu ogolaaneysaa in ay aad u dhabta ah ee siiyay mid ka mid ah, ama in ka badan, sawirada si dhab ah isku qiyaas iyo booska.
2. Dooro darafka hogaaminaya saamaynta iyo nooca Command + T - tani khuseysaa default cross-milmi in bilowga clip ah.
3. beddel ku cross-baabi'inayo la Slide ah (Raadka Browser> Dhaq> Slide). Dooro slide ah, ka dibna la beddelo jihada slide ee Isbatooraha si duula oo ka laayeen midig.
4. Aan niraahno aad rabto in laga takhaluso meel bannaan oo dhinaca midigta ee dhulka. Habka ugu fudud ee arrintan loo sameeyo waxaa loo siii. Dooro clip dhulka, ka dibna riix icon dalagga ee geeska hoose ee bidixda ah daawadayaasha. Image la xushay ayaa baararka buluug rukummada iyo labada geesood.
Jiid gees ah, ama geeska, ilaa image la jaray sida aad jeceshahay. Guji "sameeyo," taas oo jarto kantaroolida ku-screen iyo sidhab ah image ka.
Picture-in-sawir waa saamayn weyn - iyo aad aan ku koobnayn kaliya hal image, waxaad heli kartaa sawiro badan shaashadda sida aad ku haboon kartaa in jir ah. Tijaabiyaan iyo la ogaado waxa fiican ee adiga kuu shaqaynaya!
(By jidkii, mahad Dr. Vint Cerf, Alcatel / Lucent, iyo Pond5 ogolaansho in la isticmaalo sawiradaan.)
Sida loo soo dejinta MP3 in Pro Goo Final on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Sida loo dar-safeeyuhu in Pro Goo dambays ah Mac
> Resource > FCP > Sida loo abuuro a Picture-in-Picture Saamaynta Isticmaalka Final Cut Pro X